BBC Somali - Cayaaraha - Baaritaanka ciiidanka booliiska Yorkshire
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 13 September, 2012, 19:05 GMT 22:05 SGA
Waxaa ku dhintay garoonka 96 taageerayaal Liverpool
Ciidamada booliiska gobolka Yorkshire ee waddankan Britain ayaa dib u furaya baaritaanka qaabkii ay u dhaqmeen booliisku masiibaddii loogu magacdaray Hillsborough ee dhacday sanadkii 1989, oo ay ku dhinteen taageerayaasha kubadda cagta.
Ciidanka booliiska ayaa waxa ay ka fakirayaan inay dib ugu celiyaan arrintan Guddiga Madaxa Banaan ee looga cawdo booliiska IPCC.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii warbixin cusub oo soo baxday ay ku heshay in saraakiisha booliiska ay beddeleen warbixintoodi oo ay isku dayeen inay eedda dhibaatada saaraan taageerayaashii kooxda kubadda cagta Liverpool, halkaasi oo ay ku dhinteen 96 qof.
Baaritaan ayaa sidoo kale ku bilwoday madaxii booliiska galbeedka Yorkshire ee xilligaasi masuulka ka ahaa shaqada.
Dhibaatada ayaa waxa sababay markii ay dadku ku bateen bilwoga cayaar semi-final ahayd oo koobka FA 15 April 1989.